Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZESN, Amai Ellen Dingani, vanoti kubva pakaziviswa nezvechirongwa ichi nezuro kusvika musi weMuvhuro pachinotanga nguva yacho iduku kwazvo yekuti veruzhinji vange vaziva nezvacho uye kugadzirira.
Nekudaro, Amai Dingani vanoti vanoona sekunge vanhu vakawanda vachakundikana kutora mukana wekuti vachinje zvitupa zvavo kuenda kune zvitsva zvichange zvichipiwa, izvo zvinonzi zvinofambidza nemichina ichashandiswa kunyoreswa kwevavhoti, yeBVR.
Vanotiwo vari kushushikana zvikuru nemashoko ekuti vanhu vasiri zvizvarwa zveZimbabwe asi vachigara munyika havasi kuzobvumidzwa kuvhota sezvakazvisiwawo nezuro namabharani mukuru VaTobaiwa Mudede.
Amai Dingani vanoti nekuda kwezvose izvi, vanyorera VaMudede tsamba vachibvunza kuti zvose izvi zviri kumbobva kupi, uye kuti vanzwisise. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhofisi yambabharani mukuru.
Hurukuro naMuzvare Ellen Dingane